Andriamifidisoa Zo · Novambra 2010 · Global Voices teny Malagasy
Andriamifidisoa Zo · Novambra, 2010
Lahatsoratra farany an'i Andriamifidisoa Zo tamin'ny Novambra, 2010
Ekoatera: Fanentanana “Diovy Quito” iadiana amin'ny siligaoma
Amerika Latina 25 Novambra 2010
Efa mba noeritreretinareo ve hoe ohatrinona no lanin'ny fiadidian'ny tanàna hanesorana ny siligaoma mipetaka amin'ny lalana rarivato? An'arivony dôlara ny vola lany hanadiovana ny arabe hiadiana amin'ny fahazaran-dratsy manary siligaona amin'ny tany. Manao fanentanana amin'ny fanalana siligaoma mipetaka amin'ny tany sady mba mampadio kokoa ny renivohitra ny fiadidiana ny tanàna sy ny sakoly maro ao an-toerana.
Afrika Mainty 21 Novambra 2010
Amerika Latina 09 Novambra 2010
Nisy voromby nianjera tany akaikin'ny tanànan'i Guasimal, miorina eo ho eo amin'ny 15 kilometatra avy eo amin'ny faritanin'i Sancti Spiritus afovoan'i Kiobà. 68 ny isan'ny maty. Minitra vitsivitsy toriana dia nifampita vaovao momba ity lozam-pifamoivoizana nahafatesana olona ity tamin'ny alalan'ny Twitter ny Kiobàna.
Karaiba 09 Novambra 2010
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 09 Novambra 2010
India: Obama bemanadala
Azia Atsimo 07 Novambra 2010
Any India, anisan'ny firenena teteziny any amin'ny faritra maharitra folo andro any Azia, amin'izao fotoana izao ny filoha Amerikana [Etazonia] Barack Obama ary nahaliana ny olona 1,2 lavitrisa ao amin'ity firenena ity izany. Voatantaran'ny fampahalalam-baovao Karana Indiana avokoa ny fihetsika kely ataon'i Obama any India ary dia miresaka momba izany ihany koa ny mpiserasera Karana Indiana
Maorisy: Vakio ny tontolom-bolongana maorisiana
Afrika Mainty 07 Novambra 2010
Fantaro sy vakio miaraka amin'ny Mauritius Blog Tracker ny bolongana, lahatsary sy sary ary ny valan-tserasera Maorisiana [izay tsy famakintsika eto matetika loatra].
Nizeria: Ohabolana Haosà ao anaty tontolom-bolongana
Karin Magana dia bolongana iray miompana amin'ny ohabolana Haosà: “Elaela aho izay no namaham-bolongana tao amin'ny Karin Magana, bolongana iray miompana amin'ny ohabolana Haosà. Hatramin'izay fotoana izao dia eo ho eo amin'ny 600 eo ny ohabolana tafavoakako ao amin'io bolongana io. Miezaka moa aho ny hanampy hatrany isan'andro ny isan'ny...